BAOLINA KITRA – “BALLON D’OR” :: Mpilalao voalohany voahosotra avy any Croatie i Luka Modric • AoRaha
BAOLINA KITRA – “BALLON D’OR” Mpilalao voalohany voahosotra avy any Croatie i Luka Modric
Taorian’ny efa nahazoany ny “The Best Awards Fifa” dia nosantarin’i Luka Modric ny fisalorana ny anaram-boninahitra, “Ballon d’Or France Football”, tany amin’ny firenen’izy ireo, Croatie.
Natolotra ny alatsinainy alina teo, nandritra ny lanonana fanaon’ity gazety boky ity isan-taona, ny amboara. Talohan’io dia efa nahafantatra ny fahazoany izany i Luka Modric, araka ny nambaran’ny tonian’ny fanoratana eo anivon’ny France Football. “Tamin’ny alalan’ny antso an-tariby no nampahafantarako azy. Izaho no niantso azy”, hoy i Pascal Ferré, tonian’ny fanoratana eo anivon’ity gazety boky ity.
I Luka Modric no mpilalao voalohany avy ao Croatie nahazo an’ity Ballon d’Or faha-63 ity. Ity irakiraky ny klioba Real Madrid ity no mpilalao faha-44 avy amin’ny firenen-tsamihafa voahosotra. Azo heverina fa izy sy ny kliobany nahazo ny anaram-boninahitra tompondakan’i Eoropa sy nahatafita ny ekipam-pireneny ho eo amin’ny lalao famaranan’ny fiadiana ny amboara eran-tany no nahavoafidin’ireo mpanao gazety 180 azy ho “Ballon d’Or 2018”.
Nosongonany tamin’ izany i Cristiano Ronaldo sy Antoine Griezmann ary Kylian Mbappé, izay nilahatra teo aoriany tamin’ny filaharana ankapobeny.
Intelo no tafiditra tao anatin’ireo mpilalao hofantenana i Luka Modric. Tamin’ny taona 2016 dia teo amin’ny laharana faha-17 ny lehilahy, raha fahadimy kosa tamin’ny taona 2017. Tamin’ity taona ity dia azon’io mpilalao 33 taona io ihany izany anaram-boninahitra izany.
Teo amin’ny sokajy vehivavy indray dia Ada Hegerberg, teratany norvezianina milalao ao amin’ny Olympique Lyonnais, no voahosotra.
Fiainana mpanao asa tanana Iankinan’ny tokantrano iray ny vokatra sokitra legioma ataon-drangahy
TETIANDROM-PIFIDIANANA :: Fantatra ny daty hamoahana ny kandidà lany ho Filoham-pirenena vaovao